Ma ọ bụ ngwaahịa Productslọ ọrụ | China ma ọ bụ ngwaahịa na ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ya
SMart-L40plus Ikanam ịwa ahụ ọkụ
Na lens modular design, SMart-L nwere nsonaazụ enweghị ndò zuru oke ma zute ọtụtụ ịwa ahụ. Dum ìhè ahụ bụ ìhè na ọnọdụ n'ụzọ ziri ezi.
SMart-L35plus Ikanam ịwa ahụ ọkụ
SL-P40 Ikanam ịwa ahụ Ìhè
Na ifuru pedal imewe, SL-P40, SL-P30 ada ogwugwo ọkụ nwere ike ịza ọtụtụ ịwa ahụ mkpa maka ya inogide na smart atụmatụ.
SL-P30 Ikanam ịwa ahụ Ìhè
XHT-D Electro-Hydraulic Tablerụ Ọrụ Isiokwu
Comprehensive ọrụ table, na electric push mkpanaka draịva, nwere ike imeju ụlọ ọrụ ahụike na-achọ na ikike-price kenyere, ala mkpọtụ, ngwa ngwa na otu ebe ọrụ, magburu onwe pụrụ ịdabere na kwụsie ike.
XHT-B Electric Operating Isiokwu
Isiokwu-H7000 Electro-Hydraulic Operating Table
Site na imepụta akụkụ ise mara mma, STable-H7000 nwere ike ịza ọtụtụ ịwa ahụ. Ọ bụ elu na-eri-irè ruru ngwaahịa na ọrụ table ahịa.
Ndokwa-U ICU Medical Hinging Bridge
Okpokoro SEcure Medical Hanging Bridge na-enye nchekwa dị mma ma dị elu maka ICU, CCU, PICU, NICU na na SEcure-U bụ ihe atụ emere na akụkụ akọrọ na mmiri.
SEcure-SJW ịwa ahụ Pendant
A na-ejikarị ọgwụ eji eme ihe na ime ụlọ ọrụ, ICU na ime ụlọ nnyefe. Ọ na-enye n'elu ikpo okwu loading, ikuku iyi na ike ọkọnọ n'ihi yiri ọgwụ na akụrụngwa. SHINVA SEcure-SJW mechanical ịwa ahụ pendant na Single ma ọ bụ Dual-ogwe aka na-enye nchebe, elu oru oma ma dị ọcha gburugburu ebe obibi nke ndị dọkịta na ndị nọọsụ.
Ndokwa-H ICU Medical Hinging Bridge
Okpokoro SEcure Medical Hinging na-enye nchekwa dị mma ma dị elu maka ICU, CCU, PICU, NICU na na SEcure-H bụ ụdị e mere yana akụkụ akọrọ na mmiri.